चौतर्फी आलोचनापछि साम्राज्ञीले लेखिन– हात्ती लम्किँदै गर्छ..‍. (१० नयाँ तस्वीर सहित) « Khabarhub
चौतर्फी आलोचनापछि साम्राज्ञीले लेखिन– हात्ती लम्किँदै गर्छ..‍. (१० नयाँ तस्वीर सहित)
काठमाडौं– पछिल्लो समय चर्चामा रहेकी साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह हालै सार्वजनिक भएका केही तस्वीरका कारण आलोचित बनिन् । आलोचनासँगै ट्रोलको शिकार बनेकी साम्राज्ञीले उक्त तस्वीरका विषयमा मुख खोलेकी छिन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल इस्टाग्रामको स्टोरीमार्फत ‘हात्ती चले बजार, कुत्ते भुके हजार’ पोस्ट गर्दै आफ्नो सार्वजनिक तस्विरका विषयमा प्रतिक्रिया जनाएकी हुन् । उनले घुमाउरो तरिकामा आफूलाई आलोचना गर्ने माथि ‘कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्कदै गर्छ’ भन्न खोजेकी छिन् ।
‘मारुनी’ र ‘रातोटिका निधारमा’को छायांकन सकिए पश्चात उनी इन्डोनेसियाको बालीमा घुमघाममा व्यस्त छिन् । घुमघामकै क्रममा बालीको एक समुन्द्री किनारमा उनले प्रेमी देवाङ्क राणासँग खिचाएको अन्तरङ्ग तस्वीरका कारण उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
त्यसो त साम्राज्ञीले तस्वीरका कारण आलोचित भए पनि त्यसको कुनै प्रवाह गरेकी छैनन् । बाली भ्रमणका केही नयाँ तस्वीरहरु पनि इन्टाग्राममा शेयर गरेकी छिन्–
प्रकाशित मिति : ७ श्रावण २०७६, मंगलबार ७ : ३८ बजे